အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မြှင့်တင်ရာ တွင် SMART CARD ကို ကိုင်ဆောင်နိုင်မည့်အဆင့်ထိ ဆောင်ရွက်ရာ၌ မည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် ကျသင့်နှုန်းထား များသည် ခေတ်ကာလနှင့် လျော်ညီမှုမရှိပါသဖြင့် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ တိုးပွားရေးအတွက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိတို့ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ မူဆယ်မြို့နယ် ၁၀၅ မိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၌ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန် သတ်မှတ်မြေနေရာ (အကျယ်အဝန်း ၁၀၅.၇၀ ဧက)အတွက် ကျသင့်တန်ဖိုးငွေ ချမှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ကျီးလေကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျီးလေကျေးရွာ- ရွာချင်းဆက် ကြိုးတံတားနှင့် မီးဇာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥဿလင်းဝကျေးရွာ-ရွာချင်းဆက် ကြိုးတံတား(၂)စင်းတို့ကို အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
(၁၆) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၁၄.၁၂.၂၀၁၆)
၁၆ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ( ၁၄. ၁၂. ၂၀၁၆ )
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ခုတင် ၅၀ ဆံ့ဆေးရုံမှ ခုတင် ၁၀၀ ဆံ့ စံကိုက်ဆေးရုံ အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် ချင်းရွှေဟော်မြို့၏ ၁၆ ခုတင်ဆံ့ ဆေးရုံကို ၂၅ ခုတင်ဆံ့ ဆေးရုံအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ရှင်းလက်ဝကျေးရွာအုပ်စု ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် သံထောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနတို့ကို ၁၆ ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ဆေးရုံများအဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့တွင် မူးယစ်ဆေးစွဲ ကုသလိုသူများအတွက် သီးသန့် ဆေးကုသဆောင်တစ်ဆောင် ခွင့်ပြုချမှတ် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း